पुरुष स्वास्थ्य को लागी खाना सल्लाह
समय: 2019-11-08 दृश्य:
त्यहाँ ठोस प्रमाणहरू छन् कि राम्रो पोषण र एक सक्रिय जीवनशैलीले पुरुषहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्छ.
स्वास्थ्यलाई चोट पुर्‍याउने खालका खानाहरू पनि त्यस्तै छन् – खानाहरू तपाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ, वा कम्तिमा धेरै पटक नखानुहोस् – त्यहाँ पनि "स्वास्थ्य मैत्री” खाना विभिन्न तरिकामा पुरुषहरूको स्वास्थ्य लाई सुरक्षित गर्दछ. यसमा फलफूल र तरकारीहरू समावेश छन्, स्वस्थ बोसो, दुबला प्रोटिन, र सम्पूर्ण अन्नहरू.
निश्चित माछा (खास गरेर चिसो पानी माछा सामन जस्तै, सार्डिनहरू, र ट्राउट) प्रदान "राम्रो चराहरू” यसले शरीरमा सूजन रोक्न मद्दत गर्दछ. पछिल्ला केही बर्षहरूमा, वैज्ञानिकहरूले प्रोस्टेट भित्र सूजन एक खतरनाक अवस्थाको रूपमा हेर्न थालेका छन् जुन क्यान्सरलाई समात्न सजिलो बनाउन सक्छ. ओमेगा3फ्याट्टी एसिड (तपाईंले उनीहरूको बारेमा EPA र DH को रूपमा सुन्नुभएको हुन सक्छ), हाम्रो शरीरले बनाउन सक्दैन कि आवश्यक वसा हो, त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई खाना स्रोतबाट प्राप्त गर्न आवश्यक छ.
"Oxidative क्षति” वैज्ञानिकहरूले धेरै वर्ष भन्दा बढि बढेको बढ्दो क्षतिलाई के भन्छन्. यो "अक्सिजन फ्री रेडिकलको कारणले भएको हो,” जुन मेटाबोलिज्मको विषाक्त उप-प्रोडक्टहरू हुन्. जब अनियन्त्रित हुन्छ, नि: शुल्क रेडिकलले शरीरमा विनाशकारी विनाश निम्त्याउँछ अक्सिडेटिभ क्षति र रोग निम्त्याउँछ. एन्टिऑक्सिडन्टहरू शरीरबाट फ्रि रेडिकल बेअसर र हटाउन मद्दत गर्दछ. जामुन महान स्रोत हो, विशेष गरी स्ट्रबेरी, कालोबेरी, ब्लुबेरी, र रास्पबेरी (उज्यालो राम्रो छ). यी फलहरूले एन्थोसाइनिन्स भनेर चिनिने शक्तिशाली एन्टिआक्सीडन्टहरू प्रदान गर्दछ.
लाइकोपिन अर्को शक्तिशाली एन्टीआक्सीडन्ट हो र टमाटरको सेल भित्तामा फेला पर्दछ. पकाउने प्रक्रिया बन्धन ढीला, हाम्रो शरीरलाई एन्टिऑक्सिडन्ट पहुँच गर्न र यसलाई प्रोस्टेटमा पठाउन सजिलो बनाउँदछ. गोलभेडा को अचार, टाँस्नुहोस्, रस, र सनदी टमाटरले हाम्रो शरीरलाई यस पौष्टिक सुपरस्टारको अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ. अझ राम्राे: टमाटर जैतूनको तेल मा पकाएको.
ब्रोकलीमा फाइटोकेमिकल हुन्छ (फाइटोको अर्थ "बोट" हो) गन्धक, छोड्दा क्यान्सर सेलहरू लक्षित र मार्ने आशंकित छ जुन स्वस्थ प्रोस्टेट सेलहरू अर्को दिन लड्न. अध्ययनले भन्छ कि क्रूसिफेरस तरकारीहरू खाँदा प्रोस्टेट क्यान्सर हुने खतरा कम हुन सक्छ. ब्रोकली मनपर्दैन? उही परिवारमा अन्य तरकारीहरू छन् जुन त्यस्तै फाइदाजनक प्रभावहरू छन्, बन्दकोबी सहित, kale, फूलगोभी र ब्रसेल्स स्प्राउट्स.
एन्टिऑक्सिडन्टको अर्को महान स्रोत, यस बहुमुखी पातमा क्याटेचिन्स भनिने बहुविध एन्टिऑक्सिडन्ट यौगिकहरू हुन्छन् (सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई भनिन्छ EGCG, Epigalloconchin-3-gallate को लागी, र एपिटेचिन), जुन anti-carcinogenic र anti-mutagenic हो भन्ने विश्वास गरिन्छ (स्वस्थ कोषहरू परिवर्तनबाट रोक्दै). बहु अध्ययनहरूको समीक्षा फेला पारे कि पुरुषहरू जसले प्रति दिन पाँच कप ग्रीन टी पिए उनीहरूलाई प्रोस्टेट रोगको खतरा कम छ.
यी सरल सुझावहरूले स्वस्थ आहार र नियमित व्यायामको साथ तपाईंको शरीरलाई ईन्धनको लागि प्रेरित गर्न दिनुहोस्.
अघिल्लो2019 नवौं शंघाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य उद्योग ब्रान्ड प्रदर्शन
अर्कोमेडोनकेयरले पुरुषको स्वास्थ्य the औ on मा पुरुषको स्वास्थ्य दिवसलाई मद्दत गर्दछ"